Mihidy ny sisin-tany i Kiribati saingy mihazakazaka hatrany ny fampiofanana amin'ny fandraisana vahiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Kiribati » Mihidy ny sisin-tany i Kiribati saingy mihazakazaka hatrany ny fampiofanana amin'ny fandraisana vahiny
Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Kiribati • Vaovao • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
I Kiribati, Repoblikan'i Kiribati, amin'ny fomba ofisialy, dia firenena nosy mahaleo tena sahabo ho 1900 kilometatra miala an'i Hawaii, ao afovoan'ny Oseana Pasifika. Ny mponina maharitra dia maherin'ny 119,000, ny antsasany mahery amin'izy ireo dia monina ao amin'ny Tarawa Atoll. Ny fanjakana dia misy atol 32 sy nosy haran-dranomasina iray lehibe, Banaba.
Ny Fahefan'ny fizahan-tany any Kiribati (TAK) dia nanomboka ny fizahan-tany Kiribati momba ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny ho an'ny fiofanana New Normal ho an'ireo mpandraharaha serivisy fandraisam-bahiny sy fizahan-tany manerana ny nosy.
Namboarina tamin'ny alàlan'ny fifampidinihana tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamana & Serivisy (MHMS), ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), ny minisitera mifandraika amin'ny governemanta, ny Chamban'ny varotra Kiribati, ary ny indostria (KCCI), ny mpikirakira fizahan-tany ary ny toeram-piofanana eo an-toerana, manome izany fizahan-tany Kiribati izany sy ireo mpandraharaha mandray vahiny mandray an-tanana ny pitsopitsony momba ny fiarovana fiarovana COVID-19.
Na dia tsy misy fandaharam-potoana voafaritra mazava aza amin'ny fotoana hisokafan'ny sisintany iraisampirenena Kiribati, dia miorina amin'ny seho fisokafana mety hisorohana ny fiarovana ny mpitsidika sy ny orinasam-pizahan-tany ary ny besinimaro amin'ny COVID-19 ireo fotodrafitrasa ireo.
Natao tao ambadiky ny programa fanaovana vaksiny Kiribati, ny Kiribati Tourism & Hospitality Protocols ho an'ny New Normal dia ahitana ireo protokol fiarovana COVID-19 fizahan-tany ho an'ny fitaterana, trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana sy fisotroana, fiarovana ny mpiasa ary fanariana fako. Ny programa vaksiny Kiribati dia maminavina ny 20% amin'ny mponina ao amin'ny firenena handray ny fatra faharoa amin'ny vaksinin'ny AstraZeneca amin'ny faran'ny volana aogositra 2021
Ny trano fandraisam-bahiny Avaratra sy atsimo Tarawa no voalohany niatrika ny fiofanana 2 andro, ary ireo mpandray anjara dia voamarina ankehitriny mba hanao fiarovana COVID-19 ho an'ny mpiasa tsirairay avy. TAK dia hanolotra fiofanana mitovy amin'izany ho an'ireo mpandraharaha fizahantany ao Abaiang sy Kiritimati amin'ny andro ho avy, raha ny fiofanana ho an'ny nosy Gilbert sy Line sisa kosa dia kasaina hatao amin'ny faran'ny taona.
Ny programa dia vatsian'ny vola amin'ny alàlan'ny fanomezana ara-toekarena ny masoivoho amerikana ao Suva, Fiji, ary tantanan'ny TAK sy KCCI.
Vaovao misimisy kokoa avy any Kiribati.